रेखा थापाले किन गरिन् कमल थापाको कडा आलोचना ? - ramechhapkhabar.com
रेखा थापाले किन गरिन् कमल थापाको कडा आलोचना ?
राजेन्द्र लिङ्देनको प्यानलबाट राप्रपाको महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी अभिनेत्रीसमेत रहेकी नेता रेखा थापाले प्रतिस्पर्धी समूहबाट अध्यक्ष पदमा उठेका कमल थापाको कडा आलोचना गरेकी छन्।
यसै पनि मतदानअघिदेखि नै यी दुई नेताबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलिरहेकै छ। यसै क्रममा अभिनेत्री थापाले शनिबार राप्रपा नेतृत्वका लागि भृकुटीमण्डपमा मतदान भइरहेका बेला पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कमल थापाविरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन्। अध्यक्षका उम्मेदवार थापाले एक जना महिलालाई मात्र आफ्नो प्यारो बनाएर अन्य महिलालाई अवहेलना गरिरहेको आरोप रेखाले लगाएकी छन्।
रेखा थापाको भनाइ जस्ताको तस्तै–
कमल थापाको हतोत्साही मनस्थिति र उहाँ कतिसम्मको कन्चुरेटिभ, र उहाँ कतिसम्मको आफैं खाउँ, आफैं लाउँ, र, एउटा हुन्छ नि! शासकीय प्रवृत्तिबाट अघि बढ्नुभएको नेता भन्ने कुरा यहीँबाट बुझियो।
किन आज पार्टी कोल्याप्स भयो? आज पार्टी किन जीर्ण अवस्थामा छ? ३३ सिट, २२ सिट हुँदै एक सिटमा मात्रै किन झर्यो? राजेन्द्र लिङ्देनको पछाडि मात्रै किन जनलहर भयो ?जनमत किन भयो? एउटा मात्रै सिट किन भयो? उहाँको यही प्रवृत्तिले गर्दा हो।
कोही पनि मान्छे अगाडि नबढ्ने? म पनि उहाँकै पार्टीको नेत्री हो नि! भनेपछि अरू नेत्री महिलाचाहिँ उहाँको कोही पनि होइन, सिरिप एउटै नेत्री मात्रै उहाँका लागि प्रियतम, प्रियसी, प्रिय पात्र हुन्छ भने अरू नेत्रीहरूले सहेर बस्छन्?
कमल थापाको नेता र कार्यकर्ता त म पनि हो नि! अनि हामीलाई सिन्डिकेट लगाउने? अरूलाई सिन्डिकेट लगाउने? र, एउटा युवा नेतृत्व अगाडि बढ्छु भनिरहँदाखेरि त उहाँले आशीर्वाद दिनुपर्ने हो नि दुईदुईवटा नेताहरूले त्याग्नु भो त? उहाले चाहिँ केका लागि कब्जा गर्नुपर्ने हो? साभार : नेपाल खबर